Ny mailaka fandaozana harona tonga lafatra | Martech Zone
Sabotsy, Desambra 15, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Vao haingana izahay no nizara infographic izay nanome porofo fa ny haingana a namerina niantso ny solontenan'ny mpivarotra amin'ny mpanjifa ho avy amin'ny alàlan'ny tranonkala, ny tahan'ny fiovam-po ambony. Tsy mahagaga raha manaraka ny lojika mitovy… ny olona ao amin'ny SaleCycle dia nahita fa ny hafainganan'ny mailaka fandaozana ny valizy fiantsenana dia mihabe ny tahan'ny fiovam-po!
Misy fanontaniana telo lehibe momba ny mailaka fandaozana harona izay tohizin'i SaleCycle:
fotoana: Mandra-pahoviana no tokony hiandrasana handefa mailaka amin'ny mpanjifanay?
Tone: Tokony ho mivantana ve isika, na hampiasa ny feon'ny serivisy ho an'ny mpanjifa?
Content: Inona no tokony ampidirintsika ao amin'ny mailaka hividianan'ny mpanjifantsika?
SaleCycle dia nametraka ity Infographic ity izay mamaly ireo fanontaniana ireo. Ny angon-drakitra dia nalaina avy amina marika malaza 200 eran-tany sy ny fomba fanao tsara indrindra tamin'ny fandaozana ny sarety fiantsenana:
Tags: mailaka fandaozanafandaozana haronatsara indrindramailaka ecommercemailakasalecyclefandaozana sarety fiantsenana
Drafitra fialantsasatra ho an'ny mpivarotra tablette sy finday
Dec 16, 2012 amin'ny 2: 11 AM
Doug dia mahafinaritra ity lahatsoratra ity! Miresaka ny zava-drehetra ho antsika amin'ny marketing mailaka. Nitady drafitra tsotra tsotra efa voasedra! Misaotra tamin'ny hafatra!
16 Desambra 2012 à 10:36
Misaotra @google-b9b77ac949b0387c92d9cc6f0a228fc6:disqus , nieritreritra izany koa aho!